Advisory amerikana ho an'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo: diniho indray ny dia
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Advisory amerikana ho an'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo: diniho indray ny dia
Ny departemantam-panjakana amerikana dia namoaka mpanolotsaina momba ny dia Repoblika Demokratikan'i Congo manoro hevitra ny fandinihana ny dia noho ny heloka bevava sy korontana sivily. Ny faritra sasany dia nitombo ny risika.
Manoro hevitra ny The Travel Advisory:
Aza mandeha mankany -
Faritany Kivu Avaratra sy Ituri noho ny Ebola.
DRC Atsinanana sy ireo faritany telo Kasai noho ny ady mitam-piadiana.
Ny heloka bevava mahery setra, toy ny fanendahana mitam-piadiana, ny fanafihana an-trano mitam-piadiana, ary ny fanararaotana, na dia tsy fahita firy raha ampitahaina amin'ny heloka kely dia kely, ary ny polisy eo an-toerana dia tsy manana loharanom-pahalalana mba hamaliana amin'ny fomba mahomby ny asa ratsy lehibe. Tandremo fa ny polisy dia mety ho polisy na mpiasan'ny fiarovana.
Tanàna maro manerana ny firenena no miaina fihetsiketsehana, ny sasany lasa nivadika herisetra. Indraindray ny tompon'andraikitra amin'ny polisy dia namaly tamin'ny paikady mavesatra izay nitarika fahafatesan'olona sivily sy fisamborana.
Ny governemanta amerikana dia voafetra ny fahafahany manome serivisy vonjy maika ho an'ny olom-pirenena amerikana ivelan'i Kinshasa noho ny fotodrafitrasa voafetra sy ny tsy fandriam-pahalemana.
Raha manapa-kevitra ny ho any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo ianao:
Aza manao fihetsiketsehana.
Mitandrema rehefa mandeha na mitondra fiara amin'ny alina.
Mitondrà kopia pasipaoro sy visa any Etazonia foana (raha ilaina). Tehirizo amin'ny toerana azo antoka ny antontan-taratasy tany am-boalohany.
Tsidiho ny Fanamarihana fitsangatsanganana CDC momba ny Ebola any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo, izay misy fampahalalana momba ity valanaretina ity.
Tsidiho ny Pejy fahasalamana momba ny mpitsangatsangana CDC ho an'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo, izay misy fampahalalana momba ny Ebola.
Makà hevitra amin'ny dokotera raha mila torohevitra momba ny fisorohana aretina. Maro ny aretina hita ao amin'ny DRC izay manana soritr'aretina mitovy amin'ny Ebola. Raha ahiahiana fa manana Ebola ianao, dia mety hiatrika fahatarana amin'ny dia.
Avereno jerena ny Tatitra momba ny heloka bevava sy ny fiarovana ho an'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo.
Faritany Kivu Avaratra sy Ituri
Ny vonoan'olona mahery vaika nefa mahery vaika mikendry ny sivily, ao anatin'izany ny famonoana olona, ​​fanolanana, fakana an-keriny ary fanodikodinana dia mitohy manerana ny faritanin'i Kivu Avaratra, Kivu atsimo, Tanganyika, Haut Lomami, Ituri, Bas-Uele, ary Haut-Uele.
Ny isan'ny tranga voamarina sy azo inoana Ebola dia notaterina tany amin'ny faritra sivy fahasalamana any amin'ny faritanin'i Kivu Avaratra sy Ituri any Kongo.
Ny governemanta amerikana dia tsy afaka manome serivisy vonjy maika ho an'ny olom-pirenena amerikana any avaratry Kivu Avaratra sy Ituri satria voafetra ny dia ataon'ny governemanta amerikana amin'ireo faritra ireo.
Tsidiho ny tranokalan'ny governemanta momba ny Mandehandeha any amin'ny faritra misy risika be.
Ny faritra RDC Atsinanana sy ny Faritany Kasai telo
Ny ampahany amin'ny DRC atsinanana sy ny faritanin'i Kasai oriental, Kasai Central, ary Kasai Occidental dia tsy milamina noho ny fihetsiky ny vondrona mitam-piadiana sy ny asan'ny miaramila. Ny fipoahan'ny herisetra lehibe dia ny fikendrena ny sivily amin'ireo faritra ireo.
Ny governemanta amerikana dia tsy afaka nanolotra serivisy vonjy maika ho an'ny olom-pirenena amerikana any amin'ny faritra atsinanan'ny DRC ary voafetra ny faritany telo an'ny Kasais satria voafetra ny dia ataon'ny governemanta amerikana mankany amin'ireo faritra ireo.